Firaansi: Of ajjeesuu hojjettootaaf hoggantoonni isaanii duraanii to'annoo jala oolan - BBC News Afaan Oromoo
Firaansi: Of ajjeesuu hojjettootaaf hoggantoonni isaanii duraanii to'annoo jala oolan
Dhaabbata Telekomunikeeshinii Firaans 'France Télécom' jedhamutti hoggantoonni duraaniifi direektarooti olaanoo duraani lama bara 2000 keessa imaammata caasefama haaraan wal qabatee hojjattoonni hedduu of ajjeesuu isaaniif to'annoo jala oolaniiru.
Didiyeer Lombard waggaa tokkoof hidhamee kan ture yoo ta'u Lowii-Piyeer Ween fi Oliviyeer Barbaroonis to'annoo jala oolanii turani.
Dhaabbatichi sana booda maqaasaa Orange'tti geeddaratee maallaqa doolaara 83,000 adabamee ture.
Manni murtii dhimma hojjatoota 39 ilaalee ture, isaan keessa 19 kan of ajjeesan yoo ta'u 12 ammoo of ajjeesuuf kan yaalanidha.
Kaan immoo jireenya rakkoo xiinsammu keessa kan galan ykn ammoo deebi'anii hojjachuu kan hin dandeenyedha.
Kun kan uumame yeroo dhaabbatichi caasefama haaraa guddaa hojjatoota hedduu miidhu diriirse dha.
Hoggantoonni olaanoo afur biroo yakka kanarratti hirmaachuun himatamanii hidhaan ji'a afuriifi adabbiin maallaqaa yuuroo 5000 irratti murtaa'eera.
Pireezdaantiifi hogganaan olaanaa duraanii dhaabbatichaa Lombaard, itti aanaan isaa Weneefi hogganaan bulchiinsa humna namaa Barberoo, sadaan isaanii irratti addabbiin maallaqaa yuuroo 15,000n murtaa'era.
UK'n of ajjeessuu ittisuuf ministira muudde
Barataa barsiistuutti qawwee sobaa aggaamuun himatame
Manni murtii Firaans 'dhaabbata keessatti miidhaa hamilee qaqqabsiisuu' akka yakkatti yeroo fudhatu kun isa jalqabaati.
Jeyaan Perrin, kan obboleessi isaa Roobart bara 2008tti of ajjeese, murtee kanaan gammadaa ta'us: "Yeroo dhaddachi adeemsifamaa turetti garuu gaddiifi gaabbiin irratti hin argamu, dabarsanii nama isaan jalatti hojjatu himatu. Jibba qofan isaaniif qaba." jechuun dhaabbata miidiyaa Libération' tti himeera.
Yeroo sanatti dhaabbati kun caasefama haaraa uummachaa ture. Lombard hojii 22,000 hambisuun yoo xiqqaate hojjattoota 10,000 irra deebiin shaakalsiisuuf yaalaa ture.
Hojjattonni maatii isaaniirraa gara iddoo fagootti geeddaraman, kaan immoo yeroo wajjirri iddoo geddaratutti boodatti akka hafan tahe, yookaan immoo hojii isaaniin hin ginnetti ramadamani.
"Karaa tokkos ta'e biraa asii nan baasaani, karaa foddaa ykn karaa balbalaa," jechuun bara 2007tti Lombaard hoggantoota olaanootti himeera jedhameera.
Imaammati caaseeffama haaraan kun hojjatoota arsuusaa amanus, yaada imaammatichi namooti akka of ajjeesan godheera jedhu garuu tasumaan haaleera.
Himannooti ragaaf kaa'aman keessaa:
Bara 2009 , dubartiin ganna 32 Paaris lafa hojjiisheetti of ajjeeste
Magaalaa Metz keessatti dubratiin tokko waggaa tokko keessatti yeroo sadaffaaf iddoo biraatti ramadamuuf akka jettu barteeti of ajjeesuu yaaltee turte.
Bara 2011, hojjataan ganna 57 hojiif Bordoo akka ga'een of ajjeese.
Viidiyoo, Gurgurtaa hojjatoota manaa: Gurgurtaa garbaa intarneeta gubbaa
Firaansitti ho'i bonaa 'nama 1500'tti siqan' ajjeese jedhan qondaalonni
9 Fuulbaana 2019
Dargaggessi lammii Firaans bariistuusaatti qawwee sobaa aggaame himatame
US irra deebiin humnoonni Ertiraa Tigraay gadhiisanii akka bahan gaafatte
Waraana Israa'el wajjin lola gaggeessaa kan jiru Hamaas eenyu?
Lola Tigraay: Gaarreen Gar'aaltaafi naannawa Hawuzeenitti maaltu ta'e?
MM Israa’el haleellaa Gaazaa 'cimsinee itti fufna' jedhan